Ankatoky ny fety: tsy azo hidirana ao Analakely | NewsMada
Nanomboka tamin’ity herinandro ity, tsy misy mety hiditra ao Analakely intsony ny ankamaroan’ny taxi-be.
Anisan’izany ireo 105 sy 114…Ho an’ireo zotra tsy maintsy mandalo ao, mandany ora roa vao tafavoaka. Mikatso tanteraka ny fifamoivoizana ao an-toerana. Amin’ny hafanana migaingaina sy ny orana, sahirana ireo mpandeha taxi-be. Maro ireo misafidy ny handeha an-tongotra raha tsy maintsy handalo an’Analakely na hiantsena ao.
Feno mpivarotra ny sisin-dalana. Mifanitsa-kitro na ny mpivarotra na ny mpiantsena. Mikisaka ny fiara ary mitandrina mafy sao mahitsaka ireo entam-barotra mivelatra amin’ny arabe. Tsy mety hiditra ao Analakely ihany koa ireo fiarakaretsaka. Noho ny fahanteran’ny fiara ampiasana, tsy afaka miaritra ny fitohanan’ny fiara ny ankamaroan’ireo fiarakaretsaka. Na maty an-dalana na midonaka mety hitera-doza.
Misafidy ny mihodidina izy ireo raha hanatitra olona fa tsy miditra Analakely intsony.
Manomboka amin’ny 8 ora alina vao malalaka ny fifamoivoizana ao Analakely. Hatrany amin’ny tapaky ny volana janoary any mihitsy vao hisava io fitohanana io, raha ny efa mahazatra ireo mpitatitra isan-taona. Misy fiantraikany amin’ny fidiram-bolan’ireo mpitatitra izao fikatsoan’ny fifamoivoizana izao satria tsy afaka mamita ny asany, toy ny isanandro, izy ireo. Tsy feno ny vola entina mody isan-kariva.